မြရွက်ဝေ: March 2010
မျက်ခုံးလေးက ရှည်ပေမယ့် သိပ်မပေါ်သေး
Posted by မြရွက်ဝေ at 5:13 PM 8 comments
ခုတလော ရှီနဂါဝကို ခဏခဏရောက်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က တရုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ချင်ရင်လိုအပ်တဲ့ "ရှီကကုဂိုင်း" (shikakugai katsudou no kyoka -資格外活動の許可) ထောက်ခံစာလုပ်ဖို့ ရှီနဂါဝက ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ကံဆိုးတာလား လူပင်ပန်းဖို့ ကံမပါတာလားမသိ (စိတ်ပင်ပန်းတာတော့ အကျုံးမဝင်) လျှောက်လွှာဖြည့်တော့ ပတ်စပို့က အဲဒီနေ့မတိုင်ခင်လေးမှာ ကုန်နေခဲ့တယ်။ ဗီဇာကတော့ ၂နှစ်နီးပါး ကျန်ပါသေးတယ်။ ပြောတတ်ရင် လျှောက်လွှာတင်လို့ရတယ်လို့ နောက်မှ သိရပေမယ့် အဲဒီတုန်းက မသိလေတော့ ဒီအတိုင်းဘဲ ပြန်ခဲ့တယ်။ တရုတ်သူငယ်ချင်းတွေက ပတ်စပို့က သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိလို့ပြည့်သွားတာလဲဆိုတော့ မြန်မာမှာ လုပ်ခဲ့လို့ ၃နှစ် ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်လို့ ဒီမှာ သက်တမ်းတိုးရင် ၁နှစ်လို့ပြောတော့ အတော်အံ့ဩသွားကြတယ်။ သူတို့တွေက ပတ်စပို့တခါလုပ်ရင် သက်တမ်း၁၀နှစ်တဲ့။ (တို့က မြန်မာလေကွယ်)
ကုန်နေတဲ့ ပတ်စပို့ကို သက်တမ်းသွားတိုးရင် အိမ်ကြီးရှင်ပါတိုးမှရမှာ။ ဆောင်ရမယ်လေ အခွန်! လျှောက်လွှာတင်ပြီး အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာကနောက်၊ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဆီက ထွက်မယ်ဆိုတော့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ လျှောက်လွှာက သူငယ်ချင်းတွေလုပ်လို့ လိုက်လျှောက်ကြည့်တာ တကယ်အလုပ် လုပ်ဖြစ်မဖြစ်က မသေချာပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ၂နှစ်ကြာတော့ ဗီဇာပြည့်တော့မှာမို့ ပတ်စပို့ကို မဖြစ်မနေ သက်တမ်းတိုးဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ရှီနဂါဝက မြန်မာသံရုံးကို သူနဲ့အတူသွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟိုလဲရောက်ရော သူက တရက်ထဲပြီးမယ်တဲ့၊ ကျမက မှီခိုလျှောက်မှရမယ်ဆိုဘဲ။ မလျှောက်ရင် အခွန်ဆောင်ရမှာပေါ့။ သူ့လို တလစာ ယန်းတသောင်းနှုန်းနဲ့ ယန်းသောင်းလေးဆယ်ကျော် (မြန်မာငွေ သိန်း၄၀ကျော်) အလုပ်အကျွေးပြုရမယ့်သဘော ~ ဂစ်!! ဒီလိုတော့ မဖြစ်သေးဘူး။ အိမ်မှာနေတဲ့သူပါဆိုမှ ဘာဝင်ငွေနဲ့ ဆောင်ရမတုန်း။
မှီခိုလျှောက်မှရမယ်ဆိုတော့လဲ လျှောက်တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ နဲနဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်မိတာက နဂိုကတည်းက ဗီဇာက မှီခိုဗီဇာလေ။ အဲဒါကို မှီခိုဖြစ်ကြောင်း ပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပေါ့။ လျှောက်လွှာယူ ဘာတွေလိုလဲမေးတော့ လက်ထပ်စာချုပ် မူရင်းနဲ့ မိတ္တူတဲ့။ လိုမယ်ထင်တာ အကုန်ယူလာပေမယ့် အဲဒါက မလိုဘူးမှတ်တော့ မယူမိဘူး။ မပါလာသေးဘူးပြောတော့ ဘယ်လိုနားလည်မှုလွဲလဲမသိ သံရုံးမှာ လက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လို့ရတယ်တဲ့။ ဟုတ်သေးပါဘူး ၂ခါ လက်ထပ်ရမလိုဖြစ်နေမှာပေါ့။ သေချာပြန်မေးတော့မှ လက်မထပ်ရသေးရင် ထပ်ဖို့ပါတဲ့။ (ဪ~ကဲ! ယူပြီးလို့ဘဲ ဒီရောက်လာတာပေါ့လို့၊ စိတ်ထဲက မျက်စောင်းလှမ်းထိုးလိုက်တာ) ဟုတ်တယ်လေ ဂျပန်ဘက်က ဗီဇာကျပြီးလို့မှ မြန်မာက ဂျပန်သံရုံးကို သွားတာ၊ အဲမှာလဲ လက်ထပ်စာချုပ် ပြရသေးတယ်၊ အဲဒီတုန်းက စာရွက်စာတန်းအပြည့်အစုံပါသွားလို့ ရစ်စရာမရှိတာတောင်မှ ကောင်တာထဲက အန်တီကြီးက "မမလေးက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရှိတယ်လား တော်တော်ဟုတ်နေကြတယ်"လို့ အပြောခံလိုက်ရသေး။ အန်တီကြီး ကြည့်ရတာ အပျိုကြီးများလား? သူ့နဲ့စာရင်တော့ ကိုယ့်အသက် အပုံကြီးငယ်တာ သေချာတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အသက်ဘယ်လောက်နဲ့ ဘယ်အချိန်ယူယူ သူ့နဲ့ဘာမှ မဆိုင်တာကြီးကိုများ။
လက်ထပ်စာချုပ်ကနေ ပြောတာ လမ်းလွဲလာပြီ။ ဒီမှာလဲ လက်ထပ်စာချုပ် လိုတယ်ဆိုတော့ ယူပြီး နောက်ရက်ထပ်သွားရတယ်။ ရှီနဂါဝကို သုံးကြိမ်မြောက်ပေါ့။ အိမ်နားကဘူတာကနေ ရှီနဂါဝဘူတာကို ရောက်ဖို့ ရထား၃ဆင့်ပြောင်းပြီး မိနစ်၅၀လောက်ကြာပါတယ်။ အဲဒီကနေ မြန်မာသံရုံးကို လမ်းလျှောက်သွားရင် ၁၅မိနစ်ကျော်တော့ ကြာတယ်။ ကုန်းပြေပြေထိပ်ကို တောက်လျှောက် လမ်းလျှောက်သွားပြီး လမ်းကျဉ်းလေးရဲ့ အဆုံး ခြံကျယ်ကြီးရဲ့ အထဲမှာ ဂျပန်မြန်မာသံရုံးရှိတယ်။ ပထမဆုံး ရောက်သွားတုန်းက သံရုံးလို့တောင် မထင်မိဘူး။ လုံးချင်းအိမ် ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တအိမ်လို့ဘဲမှတ်တာ။ တံခါးဝမှာ ကပ်ထားတဲ့ ခပ်မှိန်မှိန်သေးသေး ကြေးပြားကို သေချာကြည့်ဖတ်မှ သံရုံးမှန်းသိရတာမျိုး။ ရုံးအဝင်ဝက စစ်ဆေးရေးရုံလေးထဲမှာ လိုတာတွေဘဲ ယူပြီး အိတ်တွေအားလုံး ထားခဲ့ရတယ်။
ပတ်စပို့ရပြီး ရုံးထဲကပြန်ထွက်လာတော့ မိုးတွေရွာနေတော့တာ။ ရုံးဆောင်နဲ့ အဝက နဲနဲလှမ်းတော့ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးသွားလဲ စိုတာပါဘဲ။ ပြီးတော့ လက်ထဲမှာက ယူသွားတဲ့ စာရွက်တွေအပြင် ပြက္ခဒိန်တလိပ်လဲ ပါလာတယ်လေ။ ပါးစပ်ထဲ ရှိရာပြောတဲ့ ပတ်စပို့ သက်တမ်းတိုးခကို "လျှော့ပေးလိုက်မယ် ပြက္ခဒိန် ဒါမှမဟုတ် မဂ္ဂဇင်းဝယ်ပါ"ဆိုပြီး မဝယ်မနေရလုပ်နေလို့ ဝယ်လာခဲ့ရတာတာပါ။ ပထမတခါ သွားကတည်းက ကိုယ့်ရှေ့ကလူတွေကို အဲလိုဘဲလုပ်နေတာ၊ အိမ်ကြီးရှင်အလှည့်မှာတော့ နင့်နေအောင်ယူပြီးပြီမို့လားမသိဘူး ပတ်စပို့သက်တမ်းတိုးခဘယ်လောက်လို့ ပြောရုံကလွဲပြီး ဘာမှကိုထိုးမရောင်းလိုက်ဘူး။ အိမ်အပြန်ရထားထဲ ပြက္ခဒိန်ကြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ အတော်ရှုပ်။
ပတ်စပို့ရပြီးတော့ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဖို့ ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ထပ်သွားရတယ်။ ရှီနဂါဝဘူတာကနေ မြန်မာသံရုံးသွားတာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားပြီး busတဆင့်ကို ဂိတ်ဆုံးစီးရင်ရောက်တယ်။ ကားပေါ်မှာ အဲဒီကိုသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အမြဲရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကောင်တာမှာ တုံကင်ရဖို့ တန်းစီရတယ်။ နေ့တိုင်း လူတွေ ရာထောင်ချီ ရှိမလားဘဲ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းအကြာကြီး တန်းမစီရဘူး။ ကောင်တာထိပ်မှာ လူ၂ယောက်က စာရွက်တွေ စစ်ကြည့်၊ လိုတာထပ်ဖြည့်ဖို့မှာပြီး တုံကင်စာရွက်ပေးလိုက်တယ်။ သူများနိုင်ငံက စနစ်ကျပုံများ။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ဖို့ အတော်စောင့်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ရာချီနေတဲ့လူတွေအတွက် ကောင်တာ ၄ခု ၁ခုမှာ ၂ယောက်စီနဲ့ အလုပ်လုပ်သွားတာ တွက်ကြည့်ရင် လူတယောက် တမိနစ်နှုန်းတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီရက်က ၂ယောက်အတူ ဗီဇာတွဲတင်ခဲ့တယ်။
နောက်၂ပတ်ကျော်ကျော်ကြာတော့ အကြောင်းကြားစာရောက်ပါတယ်။ ရုံးအောက်ထပ်က ဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် စာတိုက်မှာဖြစ်ဖြစ် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဖို့အတွက် ယန်းလေးထောင်တန် တံဆိပ်ခေါင်း တယောက်တခုဝယ်ပြီး formမှာ ကပ်ရတယ်။ ဒီတံဆိပ်ခေါင်း ပိစိကွေးလေးက ယန်းလေးထောင်တန်တာမို့ အတော်အံ့ဩမိတာ။ အတုလုပ်တဲ့သူ မရှိဘူးလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဒီလောက် စည်းကမ်းကြပ်တဲ့နိုင်ငံမှာ ခိုးလုပ်လဲ မိမှာပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ဒီတံဆိပ်ခေါင်းက ဒီလို အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ သုံးတာမို့ ဘယ်သူမှလဲ အတုမလုပ်ရဲလောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ အတွေးခေါင်ကြည့်တာ။ အဲမှာလဲ တန်းစီ တုံကင်ယူပြီး အတော်စောင့်ရတယ်။ ထိုင်ခုံတွေရှိပေမယ့် အဲဒါနဲ့ မလောက်အောင်ကို များတာပါ။ အပြင်မှာ အတော်အေးပေမယ့် အဲဒီထဲမှာ heaterဖွင့်ထားဖို့မလိုအောင် လူငွေ့တွေနဲ့ အိုက်စပ်စပ်ဖြစ်နေတယ်။
တကယ်က အဲဒီနေ့မှာ တခါတည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်လျှောက်လွှာတင်ဖို့ပါဘဲ။ ဗီဇာမှာ အဲလောက်ကြာမယ်မထင်မိတာ အတော်ကြာသွားတာ။ နေ့လည်၁၂နာရီထိုးဖို့နီးသွားပြီး သူကအလုပ်ဆက်သွားရမှာမို့ ပြန်ခဲ့ရတယ်။ နဲနဲကောက်ကွေးလုပ်ပြီး ပြန်ခဲ့တာပေါ့။ တခါတည်းပြီးမယ် မှန်းထားမိတာကိုး။ သူက နောက်ရက်ထပ်သွားမယ်ပြောပေမယ့် သူမပြောခင် သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်းပြီးသွားဖို့ တိုင်ပင်ပြီးသွားပြီ။ စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ သူငယ်ချင်းနဲ့ဆို စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာ စကားပြောနေရင်လို့ရတယ်။ သူနဲ့ဆို ဝစီပိတ်လုပ်နေတာမို့ တယောက်ထဲ ငေါင်နေရတာ။
ဒီလိုနဲ့ မနေ့က တခေါက် ရှီနဂါဝကို ထပ်ရောက်တယ်။ ရှီနဂါဝဘူတာက အတော်ကြီးတဲ့ဘူတာတခုပါ။ အဲဒီမှာ ရုံးတွေများတာမို့ လူအသွားအလာလဲ တော်တော်များတယ်။ ရဲတွေလဲများတယ်။ ရဲဆိုပေမယ့် အရပ်ဝတ်စုံနဲ့ပါ။ ရုတ်တရက် ရှေ့မှာလာရပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ရဲဝန်ထမ်းကဒ်ဖွင့်ပြလို့ နိုင်ငံခြားသားကဒ် ထုတ်ပြပါလို့ ပြောတာမျိုး။ သူနဲ့အတူသွားတုန်း ၂ခါလောက် ကြုံဘူးတယ်။ ပြီးရင်ဘယ်သွားမှာလဲပေါ့။ ရှောင်တခင်စစ်တဲ့သဘောပါ။ ဒီဘူတာမှာ နိုင်ငံခြားအသွားအလာများလို့ တရားဝင်နေတာ ဟုတ်/မဟုတ် စစ်တယ်။ သူကတော့ နိုင်ငံခြားသားကဒ်အပြင် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကဒ်ပါထုတ်ပြလိုက်တယ်။ တခါတလေ နိုင်ငံခြားသားကဒ်ထုတ်ပြလဲ ဘာလုပ်နေလဲ ဘာညာမေးခွန်းတွေက လာသေးတယ်လေ။ အဲဒီတော့ တခါထဲ ကုမ္ပဏီကဒ်တွဲပြလိုက်ရင် ဘာမှမမေးတော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တခေါက်သွားတုန်းကတော့ ရဲလာမမေးဘူး။ မနေ့က တယောက်ထဲသွားတော့လဲ လာမစစ်ဖူးရယ်။ ကိုယ်ကတောင် သူတို့ကိုမတွေ့လို့ ဘယ်နားက ပေါ်လာမလဲလို့ တချက်ရှာကြည့်လိုက်မိသေးတယ်။ :D
ခုရက်ပိုင်းမှာ နေလို့လဲမကောင်းပါဘူး။ ဟိုနာလဲနာ ဒီနားလဲနာ တကိုယ်လုံးမနာ ကွက်တိကွက်ကြားနာဖြစ်နေတာ။ ဖျားမလိုဖြစ်ရာကနေ အချိန်မှီဆေးသောက်လိုက်တော့ မဖျားဘဲ အစွယ်အပွါးဖြစ်တဲ့ နှာစေးချောင်းဆိုးက ကျန်နေတယ်။ ရာသီဥတုကလဲ တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေနဲ့။ ဒီကြားထဲ မိုးပါရွာတော့ နှာစေးက မပျောက်နိုင်ဘူး။ မျက်လုံးတွေလဲ ပူလာတယ်။ ဆေးတော့ သောက်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ထဲကပိုးကဘဲ အသက်ရှည်တာလား ဂျပန်ကဆေးကဘဲ ပျော့တာလားမသိ မပျောက်နိုင်သေးဘူးရယ်။ သွားမယ့်နေ့ မတိုင်မီ မိုးလေဝသကြည့်တော့ မိုးဖွဲဖွဲရွာမယ် လေလဲပြင်းမယ် အေးမယ်ဆိုတော့ အင်္ကျီအထပ်ထပ်အပြင် "ဟော့ကအိရို့"လို့ခေါ်တဲ့ heater packကို ဗိုက်မှာတခု ခါးမှာတခု ကပ်လို့ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ သွားရတယ်။ အဲဒါမှအတော်ဘဲ။
ရုံးမှာ သူငယ်ချင်းက ဗီဇာသက်တမ်းတိုးလျှောက် ကျမက shikakugaiလျှောက် ၂ခုလုံးပြီးသွားတော့ ကြုံတုန်း တခြားကောင်တာမှာ multiple re-entryလျှောက်လိုက်တယ်။ အဲဒါက တခါတည်း ပြီးပါတယ်။ ရိုးရိုး re-entryဆိုရင် ယန်းသုံးထောင်တန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရတယ်။ တကြိမ်ပြန်လို့ရတယ်။ multiple re-entryဆို ယန်းခြောက်ထောင်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇာသက်တမ်းအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ multiple re-entryဘဲ လျှောက်ထားလိုက်တယ်။ ပြန်ဖြစ်တာ မပြန်ဖြစ်တာကတပိုင်း၊ ရှိထားတော့ ပြန်မယ်ဆို လိုအပ်တဲ့ အလုပ်တခုရှင်းထားတာပေါ့။
အဲဒီကအပြန် နေ့လည်၁နာရီကျော်နေပြီမို့ ဘူတာနားမှာ စားစရာဆိုင်ရှာပါတယ်။ ရှီနဂါဝဘူတာနဲ့ ဆက်ရက် "အတိုရဲ" (atré)ဝင်ကြည့်တာ ဆိုင်တွေက ဘားပုံစံချည်းနဲ့ ဈေးလဲသိပ်သက်သာတာမို့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်လို့ရမယ့် ဆိုင်လိုက်ရှာတယ်။ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းကနေ ဆိုင်ရှာပြီး google map ကတဆင့် လျှောက်သွားတယ်။ မိုးရွာထဲ ဟိုလည် ဒီလည်နဲ့ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ တကယ်ဆို ဘူတာကနေ ကုန်းကျော်တံတားလမ်းအတိုင်း လျှောက်သွားလိုက်ရင်ရတာကို အောက်ဆင်း လမ်းကူးပြီး လျှောက်ရှာနေလို့ မတွေ့တာ။ ဝင်သွားတဲ့ ဆိုင်က gusto (ガスト) ဆိုတဲ့ဆိုင်။ အဲဒီဆိုင်ခွဲလိုမျိုး အိမ်နားမှာလဲရှိပါတယ် ၂ခါ လောက် စားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ရှီနဂါဝဘူတာနားကဆိုင်လောက် ချာတူးလန်တာ ပထမဆုံး ကြုံဖူးတယ်ပြောရမယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်ရတဲ့ ထိုင်စရာနေရာမရှိလို့ ပထမပိုင်း ဆေးလိပ်နံ့ အတော်ခံလိုက်ရတယ်။ ၂ယောက်သား မှာပြီးသားရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းက တဇွန်းနှစ်ဇွန်းစားရင်း အသားလဲ မပါသလောက်ဘဲလို့ပြောတယ်။ ပြထားတဲ့ပုံနဲ့ ချပေးတာ ကွာတတ်မှန်းသိပေမယ့် ခုလို ထမင်းတပန်းကန်လုံးမှာ အသားလွှာကြော်ကို တဇွန်းသာသာလောက်သာပါတာတော့ လွန်ပါတယ်။ ပုံထဲမှာက ထမင်းတပြင်လုံးနီးပါးဖုံးနေအောင် အသားပုံနဲ့ ပြထားတာကိုး။
သူငယ်ချင်းပြောမှ ကိုယ့်ပန်းကန်ကို ကြည့်မိတယ်။ "ကင်ချီ ချီဂဲ"မှာတာ အသားလုံးဝကို မပါလာတာပါ။ ကိုယ်ဘဲမှားသလားပေါ့။ သူငယ်ချင်းက မကျေနပ်ဖူး ခေါ်ပြောမယ်ဆိုတာနဲ့ လှမ်းခေါ်ပြောမှ ဟယ် အသားမပါသွားဘူးလား ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ယူသွားတယ်။ အထဲက ဥဒွန်းဂျုံကြာဇံပြားတုတ်တုတ်တွေက ၃မျှင်လောက် စားပြီးနေပြီ။ နဂိုကတည်းက အများကြီးမစားနိုင်လို့ နည်းတာမှာပါတယ် ၂ခါ ပြန်စားရသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒုတိယတခေါက်မတော့ ပုံထဲကလိုမဟုတ်မယ့် အသားလွှာပါးပါးလေး ၄ဖတ်လောက်ပါလာတယ်။ ဥဒွန်းဖတ်တွေက မစားနိုင်တော့တာမို့ နဲနဲဘဲစားလိုက်တယ်။ တခြားအစီအငေါ်မတည့်တာလဲ အများကြီးဘဲရယ်။ နောက်မလာတော့ဘူး "ရှီနဂါဝက ဂတ်စုတို"ရေ။
အေးအေးဆေးဆေး ဆက်ထိုင်ချင်ပေမယ့်လဲ ရုံးဆင်းချိန် တိုက်ရင် ရထားကြပ်တော့မှာမို့ ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းက စကားတပြောပြောနဲ့ဆိုတော့ ယောင်ပြီး ကိုယ်စီးမယ့်ရထားလိုင်းဘက်လိုက်လာလို့ သတိပေးရတယ်။ ဘူတာပလက်ဖောင်းတူပေမယ့် သူနဲ့ကိုယ်က ကျောချင်းဆိုင် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပြန်ရမှာလေ။ ကိုယ့်ဘက်ရထားအရင်ဆိုက်တော့ တာ့တာလုပ်ပြီး အရင်ပြန်ခဲ့တယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ကပ်ထားတဲ့ heater packက အပူလျော့လာပြီလေ။ အိမ်နားမှာ ဈေးဝင်ဝယ်၊ အိမ်ရောက်တော့ လက်ဖက်ရည်တခွက်သောက် ဗိုက်ဖြည့်နားနေလိုက်တယ်။ ဒါကို နှာခေါင်းက တော်တော်ပိတ်ပြီး မျက်လုံးတွေပူလာလိုက်တာ။ အဖျားတော့ မရှိပါဘူး။ မအိပ်ခင် 'ဂျပန်ဆေးကလဲ အားပျော့လိုက်တာလို့' ပတွတ်ပြီး ဆေးသောက်အိပ်လိုက်တယ်။ မနက်ကျ ထမင်းဘူးလဲ မထည့်ပေးနိုင်တော့ဘူး။ ခုထိ နှာခေါင်းတပေါက်နဲ့ အသက်ရှူရတုန်း။ တဖက်က ပိတ်နေလို့။ ၂ဖက်လုံးမပိတ်တာ တော်သေးတယ် ပြောရမယ်။ နို့မို့ဆို ပါးစပ်နဲ့ ရှူနေရလိမ့်မယ်။ တပတ်ကျော်လို့ လျှောက်လွှာပြန်ကျလာရင် ရှီနဂါဝ ထပ်သွားရဦးမှာမို့ အဲဒီမတိုင်ခင် နှာပိတ်နှာမွှန်ပျောက်ချင်ပါရဲ့။
Posted by မြရွက်ဝေ at 2:39 PM2comments